भोली मंसिर २८ गते तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस – Jaljala Online
Posted on December 13, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
भोली मिति २०७६ साल मंसिर महिनाको २८ गते शनिवार रहेको छ । मेष -आफ्नो प्रतिफलबाट अरूले फाइदा उठाउन सक्छन्। परिस्थितिवश आँटेको काममा विलम्ब हुनेछ। सहयोगीहरूले बीचैमा हात झिक्न सक्छन्। मौका आए पनि समयमा जागरुक नबन्दा पछि परिनेछ। उपलब्धिका लागि दोहोर्याएर काम गर्नुपर्ला। काम पूर्ण नभए पनि मिहिनेतले आंशिक लाभ दिलाउनेछ। आर्थिक लेनदेनमा अलि होसियार रहनुहोला।
बृष -अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञान र कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। तर आत्तिने बानीले बोलीको गलत अर्थ लाग्न सक्छ। हातमा आएको रकम अरूका लागि खर्चनुपर्नेछ। अरूको मुख ताक्ने बानीले आफ्नो काम अधुरो रहनेछ। शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर अघि बढ्नुहोला। बुद्धिले काम लिँदा चिताएको योजना कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।
मिथुन -चिताएको काम रोकिए पनि रमाइलो जमघटमा सहभागी बन्ने अवसर आउला। आफन्तसँग भेटघाट हुनुका साथै स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। पहिलेको सफलताले नयाँ काममा हौसला जगाउनेछ। तर आगन्तुकहरूले अलमल्याउने हुँदा कामलाई बाधा पुग्नेछ। स्वास्थ्यका लागि खानपानमा सजग रहनुहोला। महत्वाकांक्षी योजना बिग्रन सक्छ।
कर्कट -पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएको काम बन्नेछ। अर्थअभाव खट्किए पनि आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जामार्फत धन जुट्नेछ। विदेश भ्रमणका लागि प्रयत्न गर्ने समय छ। टाढाका साथीभाइले काममा साथ दिनेछन्। तर, खर्च बढ्नेछ भने समयमा आलस्य गर्ने बानीले पछि परिनेछ। लगानी बढाउने अवसर प्राप्त हुनेछ।
सिंह -दिन निकै लाभदायक रहनेछ। प्रयत्न गर्दा राम्रो उपलब्धि हातलागी हुनेछ। पहिले रोकिएको काम बन्नेछ भने जिम्मेवारी समेत बढ्न सक्छ। आम्दानी बढ्नाले उत्साह जाग्नेछ। व्यापारमा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ। श्रमको उचित मूल्यांकन हुनेछ। सञ्चित धनको उपयोग गर्दा फाइदा हुनेछ। दिगो काम सुरु हुनेछ र छोटो समयमै उपलब्धि हातलागी हुनेछ।
कन्या -आँटले काम लिन नसक्दा केही पछि परिनेछ। समयको तालमेल नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरू सक्रिय रहनेछन् भने अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन्। सानातिना काममै अल्झनुपर्नेछ। कामको राम्रै मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल हातपार्न समय लाग्नेछ। दीर्घकालीन योजना बनाएर काम प्रारम्भ गर्ने बेला छ।
तुला -मेहनत गर्दा भाग्योन्नतिको समय छ। सानो प्रयत्नले दिगो लाभ हुने काम सम्पादन हुनेछ। काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ। शुभचिन्तकहरूले साथ दिनाले कर्मयोग बलियो रहनेछ। अरूको काममा जुट्नुपरे पनि फाइदा आफैंलाई हुनेछ। लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। पदीय जिम्मेवारीसमेत प्राप्त हुन सक्छ। धेरैले आफ्ना कामको तारिफ गर्नेछन्।
बृश्चिक -चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ला। परिस्थितिको चक्रमा अलमलिनुपर्दा कार्यसम्पादनमा समय लाग्नेछ। अस्वस्थताले कमजोर भइनेछ। शुभचिन्तकहरू टाढा हुनेछन्। सम्भावना देखिए पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न समय लाग्नेछ। स्वास्थ्यका लागि व्यायाम तथा आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। खर्च र चुनौतीको समय रहेको हुँदा अलि सजग रहनुपर्ला।
धनु -बिछोडिएका आफन्तजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ। अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिनेछ। व्यापार र पेसाबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। आफन्तसँग सुमधुर सम्बन्धका लागि व्यवहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। लोकाचारका पछि लाग्दा अरूले फाइदा उठाउन सक्छन ।
मकर -काममा केही चुनौतीहरू देखिनेछन् र सोचेको फाइदा उठाउन मुस्किल पर्नेछ। वैधानिक प्रावधानले पनि लक्ष्यमा पुग्न अप्ठ्यारो पर्नेछ। प्रतिस्पर्धी बढ्नाले अधिकार सुरक्षा गर्न जुट्नुपर्नेछ। चिताएका काममा बाधा पुर्याउनेहरू प्रशस्तै हुनेछन्। केही अप्ठ्यारो परिस्थिति सामना गर्नुपर्ला। फजुल खर्चका साथै ठगीमा परिने योग भएकाले होसियार रहनुहोला।
कुम्भ -प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। सेवामूलक कामबाट धनलाभ हुनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। प्रयत्न गरेका काम सजिलै सम्पादन हुनेछन्। अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ मिल्नेछ। सन्तान वा अनुयायीले साथ दिनेछन्।
मीन -नियमित काम सम्पादन भए पनि पारिवारिक मतभेदले व्यवधान निम्त्याउनेछ। बेसुरमा वचन दिने बानीले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। निर्णायक मोडमा दुविधा उत्पन्न हुने समय रहेकाले सजग रहनुपर्ला। निर्णय लिन केही अलमल भए पनि पछि लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक नगर्नुहोला।
तुलसीपुर उपमहानगरद्वारा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक, के-के परे प्राथमिकतामा ?
जेठ २४, दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६-०७७ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गरेको छ । शुक्रबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले दुईसय ७२ बुदाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रमुख पाण्डेले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी बर्षलाई सडक बर्षका रुपमा लिईएको छ । जसमा आगामी बर्ष गाउँ-गाउँमा सडक […]
कामदार कटौती गर्ने रोजगारदाता बढे
कात्तिक २४, काठमाडौं । रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठानहरुले आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत श्रमिक कटौती गर्ने थालेका छन् । ठूला उत्पादन कम्पनी, बीमा, निर्माण कम्पनी, बैक, साना उद्योग, कृषि फाम, टेक्सटायल जस्ता रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक कटौती गर्ने थालेका हुन् । रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिक कटौती गरेको उजुरी श्रम अदालतमा पर्ने क्रम बढेको छ । गत वैशाखयता ५ सयभन्दा […]
तीज मनाएर फर्किएका चेली दुर्घटनामा: ३ को मृत्यु, २३ घाइते [नामसहित]
Posted on September 4, 2019 Author Jaljala Online
भदौ १८, काठमाडौँ । तीज मनाएर माइतीबाट घर फर्किंदै गरेका महिलाहरू सवार जिप स्याङ्जाको गल्याङमा बुधबार दुर्घटना हुँदा एक बालकसहित ३ जनाको मृत्यु भएको छ। २३ जना घाइतेको पाल्पामा उपचार भइरहेको छ। पाल्पाको हुँगीबाट आउँदै गरेको लु१ज ३८४१ नम्बरको जीप गल्याङको दिमिक भन्ने स्थानमा दिउँसो १२ बजे दुर्घटना हुँदा जीपमा सवार १० महिने बालक प्रसून […]
आज २०७६ मंसिर २८ गते शनिबार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस